Apple namoaka Xcode 9.3 miaraka amin'ny endri-javatra vaovao amin'ny fampiasana bateria | Avy amin'ny mac aho
Omaly dia tolakandro be asa ho an'i Apple, satria ny bandy avy ao Cupertino dia namoaka ny milina beta ary namoaka kinova samihafa ho an'ny macOS 10.13.4, tvOS 11.3 ary iOS 11.3. Fa ankoatr'izay dia nanararaotra ny tadion'ny varotra ihany koa izy ireo mba hanombohana ny beta voalohany an'ny Xcode 9.3 ho an'ny mpamorona.
Ity beta vaovao ity dia mamaha bibikely marobe izay androany sy hatramin'ny namoahana ny kinova farany an'ny Xcode 9.3, tamin'ny faran'ny volana desambra, dia nanolotra ny fangatahana, tamin'ny fotoana manangona ireo tetik'asa vita amin'ny Swift, ny fiteny fandaharana izay lamaody mihamitombo hatrany eo amin'ny vondrom-piarahamonim-pampandrosoana, fa tsy Apple fotsiny.
Iray amin'ireo zava-baovao ateraky ny macOS 10.13.4 izay nitondra antsika tamin'ny beta voalohany, hitantsika io amin'ny fampandrenesana tsy ho ela, fampiharana izay tsy mifanaraka amin'ny processeur 64-bit dia hijanona tsy hiasa. Ity hafatra ity dia aseho isaky ny manokatra rindranasa 32-bit izahay, ary koa ny fampitandremana izay nasehon'ny iOS 10 isaky ny nampiasa rindrambaiko novolavolaina afa-tsy 32 bitika izahay, ny fampiharana izay apetraka amin'ny iOS 11 dia nijanona tsy niasa tanteraka intsony.
Ny zava-baovao lehibe tonga tao amintsika avy amin'ny tanan'ny beta voalohany an'ny Xcode 9.3 dia hita ao amin'ny fitaovana vaovao, fitaovana iray mamela ny fanatsarana ny fanjifana bateria amin'ireo rindranasa, na ireo izay natao ho an'ny iOS na ireo izay natao ho an'ny macOS. Ity kinova ity dia hampitandrina ny mpamorona rehefa noforonina ny fampiharana hamoronana fampiasana CPU be loatra, fampiasana be loatra izay miafara amin'ny fiatraikany amin'ny fanjifana batterie an'ilay fitaovana. Ity rafitra ity dia hampandre ny mpamorona ny zava-bita atolotry ny rindranasa raha vao tonga ao amin'ny App Store izy ireo, raha toa ka efa nampihetsika ny safidy ny mpampiasa hizara vaovao amin'ireo mpamorona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple dia namoaka Xcode 9.3 miaraka amina endri-javatra vaovao amin'ny famakafakana fampiasana bateria
Ny macOs High Sierra 10.13.4 dia mampatsiahy antsika ny tsy fitoviana amin'ny ho avy amin'ny fampiharana 32-bit.